🥇 ▷ Commandos 2 Remaster ayaa lagu sii deyn doonaa Android iyo IOS dhamaadka sanadkaan! ✅
Commandos 2 Remaster ayaa lagu sii deyn doonaa Android iyo IOS dhamaadka sanadkaan!
Commandos 2 shaki la’aan wuxuu ahaa mid ka mid ah magacyada istaraatiijiyadeed ee ugu wanaagsan abid. Taasi waxay dhahday, sanado badan ayey soo jiidatay taageerayaal badan.
Laakiin sidaad hore u ogtahayba, ciyaaruhu waxay gaboobayaan oo sii daaleen. Xaqiiqdiina waxaan qiraynaa in dhibaatada kaliya ee ka jirta Commandos 2 ay ahayd shaki la’aan shaki galinta tiknoolajiyada.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in war wanaagsan uu suuqa u imanayo. Ka dib oo dhan, waxaa dhawaan lagu dhawaaqay in Commandos 2 Remaster la sii deyn doono dabayaaqada sanadkan … Laakiin ma mudan tahay?
Maxay ku kala duwan yihiin ciyaartoygu ka arki karaan Remasterkaan?
Sida uu shaaca ka qaaday Kalypso, Commands 2 Remaster wuxuu hirgalin doonaa horumar la taaban karo ee sawirada iyo waliba ciyaarta ciyaarta. Tani waa sababta oo ah marka la helo in aan nahay sannadka 2019, tani waa inay noqotaa ciyaar suuq-geyn ah.
Sidoo kale, waxaan helnay macluumaadka ka duwan ciyaartii ugu horreysay ee uu abuuray Pyros Studios, Remasterkaan waxaa lagu horumarin doonaa Yippee Entertainment weyn. Markaad eegto magacyadii ugu dambeeyay ee la sii daayay, waxay noqotay dhabar jab dhab ah.
Qandaraaslayaasha Sniper Ghost Warrior ayaa durba leh Taariikhda sii deynta
Laakiin ka dib oo dhan, waa maxay ujeeddada ugu weyn ee ciyaarta?
Hadaadan aqoon, Commandos 2 waa ciyaar istaraatiijiyad ah halkaasoo ay ciyaartoygu ku abuuri doonaan taatiko waqtiga dhabta ah, badhtamaha jawiga Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Oo sida magaca loo adeegsado, ciyaartoydu waxay la kulmi karaan ficilkii ciidammada gaarka ah ee Ingiriiska, ee loo yaqaan Commandos.
Isku soo wada duuboo, inkasta oo tani ay umuuqato ciyaar kale oo duug ah oo Remaster laga helayo laguna sii daayo aaladaha hadda jira, waxaan aaminsanahay Commandos 2 inay wax walba ku guuleystaan ​​guul aan caadi aheyn. Laakiin waxaan sugi karnaa oo arki karnaa waxa dhaca!
Commandos 2 ayaa loo siidaayaa dhamaadka sanadkaan PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch oo hada kujira Android iyo IOS.
Ma jeceshahay waxaad akhrido? Nala wadaag aragtidaada fikradaha hoose.